Sababta Dhabta Ahayd Ee Aanu Neymar Jr Uga Qayb Galin Xafladii Abaal Marinta Xidiga Sanadka Ee Kylian Mbappe Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Neymar Jr ayaa xalay ka soo qayb galin xafladii abaal marinta ee uu saaxiibkiisa PSG ee Kylian Mbappe uu ku gudoomay abaal marinta ciyaartoygii Ligue 1 sanadkan ugu fiicnaa.
Inkasta oo ay ahayd xafladii ugu muhiimsanayd ee xili ciyaareedka horyaalka France, haddana Neymar Jr ayaan ka soo muuqan xafladan iyada oo ay marti sharaf badani kala soo qayb gashay Kylian Mbappe abaal marinta uu ku guulaystay.
Laakiin waxaa hadda xog laga helay goobtii uu Neymar Jr kaga mashquulay in uu saaxiibkiisa Kylian Mbappe la qaybsado farxadii abaal marinta xidiga sanadka ee horyaalka France ugu fiican waana arin qariib ah in uu arintan ku seegay xaflada sanadka Ligue 1.
ESPN ayaa shaaciyay in Neymar Jr uu isla magalaada Paris kula xafladaynayay fanaanada Rihanna isla markii uu xidiga kooxdiisa PSG ee Kylian Mbappe uu gudoomayay abaal marinta xidiga sanadka ee horyaalka France ugu fiican.
Rihanna ayaa joogta magaalada Paris halkaas oo ay xaflado ku soo bandhigi doonto laakiin Neymar Jr ayaa halkii uu Mbappe kala qayb gali lahaa xaflada abaal marinaha waxa uu ka doortay in uu si shaqsi ah ula xafladeeyo Rihanna.
Laakiin Neymar Jr ayaa si dhab ah u xaqiijiyay in warkani uu run ahaa kadib markii uu bartiisa Instagram soo dhigay sawirkiisa oo ay kula jirto Rihanna wuxuuna soo raaciyay: “Boqorada dumarka ugu awooda badan”.
Neymar Jr ayaa la fahmi karaa in aanu jeclaysan in uu da’yarka kooxdiisa PSG kala qayb galo abaal marintii xidiga sanadka ee France ugu fiican mana aha markii ugu horaysay ee uu xaflado seegay intii uu PSG joogay.
Neymar Jr ayaa sanadkii hore ka maqnaaday xafladii abaal marinaha xidiga aduunka ugu fiican kadib markii uu ku soo bixi waayay tobankii ciyaartoy ee ugu sareeyay.
Neymar Jr oo hore uga baxsaday hadhka Lionel Messi ayaa hadda u muuqday in uu galay hooska Mbappe kaas oo xidiga reer Brazil ku garaacay xidigii sanadka ee France ugu fiicnaa.
Si kastaba ha ahaatee, Neymar Jr oo hore kaalinta saddexaad uga galay abaal marinta Ballon d’Or ayaa gabi ahanba iska dhex waayay liisaska sare ee ciyartoyda aduunka ugu fiican tan iyo markii uu PSG ku biiray.